Antoine Griezmann oo durba la ogaaday lambarka uu u xiran doono kooxdiisa cusub ee Barcelona… (Waa kuma xiddiga weyn ee lambarkaas looga qaadi doono?) – Gool FM
Haaruun July 12, 2019
(Barcelona) 12 Luulyo 2019. Waxaa durba banaanka la soo dhigay lambarka uu Antoine Griezmann u xiran doono kooxdiisa cusub ee Barcelona, iyadoo laacib weyn oo kooxda ka tirsan haatan lambarkaas looga qaadi doono.
Laacibka reer France ee Antoine Griezmann ma’ahan mid ka samri kara lambarkii lagu bartay ee 7-aad, balse dhibaatadu waxa ay tahay Coutinho ayaa lambarkaas haatan u xirta Barca.
Xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho ayay fal-celintiisa in la arko waxa ay noqon doontaa mid xiiso leh marka ay Barceloa go’aansato inay la qaado lambarka 7-aad oo ay rabto inay u gacan geliso Griezmann.
Griezmann lambarkaan 7-aad aad ayuu u jecel yahay waxaana uu u arkaa inuu yahay lambar uu nasiib ku leeyahay ama nasiib gaar ah wata, iyadoo soo xirtay lambarkaan waayihiisa ciyaareed oo dhan xitaa waxa uu u qaataa xulkiisa qaranka Faransiiska, taasoo la micno noqonaysa inuusan aqbali doonin inuu qaato lambar kale.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ee Griezmann ayaa maanta ku soo biiray Barcelona, balse Coutinho ayaan ku soo laaban doonin kooxda Barca illa 4 bisha Agoosto, taasoo kooxda Catalan siinaysa wakhti ku filan oo ay xaaladda ku qaboojiso, labadaan xiddigna ku qanciso.
Si kastaba ha ahaatee, wararku waxa ay intaa ku darayaan in xiddiga reer Brazil laga diri karo garoonka Camp Nou, maadaama mustaqbalka ciyaaryahan Coutinho ee kooxda Barcelona aan la hubin, sheekada ayaana faraha ka sii bixi doona haddii kooxdu isku dayso inay la soo saxiixato Neymar, markaasoo ayba hubanti noqon karto in albaabka loo tilmaamo Coutinho.